XOG LA OGAADAY: Maxaa ka jira in Axmed Madoobe uu mowqif adag ka qaatay in uu telefoon kula hadlo Farmaajo?! (Maxaa Cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG LA OGAADAY: Maxaa ka jira in Axmed Madoobe uu mowqif adag...
XOG LA OGAADAY: Maxaa ka jira in Axmed Madoobe uu mowqif adag ka qaatay in uu telefoon kula hadlo Farmaajo?! (Maxaa Cusub?)
Kismaayo (Halqaran.com) – Warar lagu kalsoonaan karo ayaa Halqaran.com u xaqiijiyey, in Beesha Caalamka ay dhexdhexaadin rasmi ah ay ka dhex-bilowday madaxweynaha Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Xogta aynu haleyno ayaa intaasi raacinaya, in saaxiibada caalamka ay khadka telefoonka kula hadleen madaxweyne Axmed Madoobe, kahor inta aysan la hadlin Farmaajo oo wada xaajoodka aqbalay.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya, in Axmed Madoobe uu ogolaadey in uu telefoonka kula hadlo Farmaajo, taasoo la filayo in ay dhacdo saacadaha soo aadan, ayna sheekeystaan.
Xogta ayaa intaasi raacineysa in ay kawada hadli doonan qaabka ugu fudud ee loosoo afjari karo, ismaadhaafka ka dhashay doorashadda iyo xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex aloolsan dhinacyadda.
DHAGEYSO: RW Xasan Cali Kheyre oo ka dhawaajiyay Sirta iyo Ujeedka uu maanta u tagay magaalada Baydhabo.
Beesha Caalamka oo dooneysa in dhinacyadda ay is afgarad gaaraan ayaa waxay isha ku haysaa xal loo helo arrimaha Amniga qaranka, Maaliyadda, qabyo tirka Dastuurka iyo Nooca doorashada sanadka 2020-ka.
Ugu dambeyn, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay horey ugu adkeysatay in aysan aqoonsaneyn natiijada doorashada Axmed Madoobe, mowqifkaasi oo iminka u muuqda mid dabcay.
kula hadlayo Farmaajo